Edna Adan Ismacil – Somaliland First
Edna Adan Ismacil
Edna Adan Ismaciil waa maamulaha iyo asaasaha Edna Adan Maternity Hospital ee magalada Hargaysa, Somaliland. Edna Adan waxay dhiiri galisa, hormoodna u tahay dabargaynta gudniinka Furcooniga ah. Edni waxay ku dhalaty magaalada Hargaysa, waxbarashadeeda iyo tababarkeeda umulisada waxayn ku qaadatay dalka Ingiriiska . 1987 ilaa iyo 1991-kii waxay u shaqaynaysay WHO (World Health Organization), waxaanay ahayd Regional Technical Officer u qaabilsan cafimaadka hooyada iyo caruurta.
Masuuliyadeeda ugu wayn waxay isugu soo ururisay sidii dhaqamada soo jireenka ah ee waxyeelo caafimadka dumarka iyo caruurta u leh, loo soo afjari lahaa.
Mudaddii u dhaxaysay 1991 ilaa iyo 1997, waxay Edna Adan waxay ahayd wakiilka WHO ee dalka Djabouti. Waxaana intaa u dheer, shaqooyin dawlada oo maqam sare leh ooy qabatay, kuwasi oo uu ka mid ahaa in ay ahayd Wasiirka Arimaha Dibada ee Somaliland sanadadii 2003 ilaa iyo 2006.
Haddaba, Marwo waxaanu kaa codsanaynaa in aad nala qaadataan fulinta qodabada DAN-QAN (Somaliland-First) ka kooban yihiin. Fikaradani oo ka turjumaysa danta dadka iyo dalka Somaliland.